That's so good, right?: Attention City-Mart Shoppers
တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက်ပိတ်တဲ့ အခုလိုကျောင်းအားလပ်ရက်မှာ ကျွန်တော့်မြို့ ငယ်လေးစီပြန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
မြို့ငယ်လေးမှာနေထိုင်သူတစ်ယောက်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာဖန်တီးဖို့နေရာလေးတွေက အတော်နည်းတယ်။ ကစားကွင်းသွားမယ်၊ ဘုရားစေတီသွားမယ်၊ window shopping သွားမယ်နဲ့ပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံး လည်နေတာ။
အချိန်တော်တော်များ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော့်အတွက် ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်အိမ်ကို သွားလည်မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး သောကြာညတွေမှာ မီးပုံပွဲလေးလုပ် ဒါမှမဟုတ် ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာ သရဲကားတစ်ကားကို ညမှောင်မှောင်မှာ အတူကြည့်။ ပြီးတော့ကာ ကိုယ်တတ်ရာ ဟင်းလေးတွေချက်ပြုတ်ပြီး အတူစားကြတာတွေဟာ အချိန်အားရတိုင်း ဖန်တီးလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုနည်းလမ်းလေးတွေပါပဲ။
ပျော်ရွှင်စရာလည်ပတ်စရာနည်းပေမယ့် ကိုယ့်ဇာတီမြို့လေးဆိုတော့ စာကျက်ရလို့ ပင်ပန်းနေခြင်းကို အပန်းပြေစေမှာပါလေ။ အိမ်ပြန် ရောက်တာနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်အလုပ်အကိုင်က အဆင်သင့်ပါ။ မိသားစုပိုင် စားသောက်ဆိုင်မှာ စာဖိုမှူးပြန်လုပ်ရခြင်း။ အထက်တန်း ကျောင်းတက်ကတည်းက အချက်အပြုတ်သင်တန်းပေါင်းစုံတက်ခဲ့သူ၊ သူများတွေဟင်းချက်တာကို ထိုင်ကြည့်ရုံဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ပိုမို ကောင်းမွန်အောင်ချက်ပြုတ်တတ်သော အမေ့သွေးပါသူ ကျွန်တော်ပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဆိုင်ကိုသွားတာ ၀န်ထမ်း ဟောင်းအချို့ကိုပဲတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းအသစ်တွေကို အရောတ၀င်လုပ်ရင်း စားပွဲထိုးကောင်မလေးတွေနှင့် ပိုပြီး နီးနီးကပ် ကပ်ပေါင်းသင်းဖြစ်တာ။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ မိန်းကလေးတွေနှင့်ဆို ပိုပြီးအထာကျလွယ်ပါတယ် ကျွန်တော့်အတွက်။
တစ်ညမှာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးကေသီက အလုပ်ပြီးရင် မျိုးဇင်အလုပ်လုပ်တဲ့ Sweet December ဟိုတယ်ရဲ့ Bar ကို သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါ တယ်။ မျိုးဇင်က အဲဒီဘားရဲ့ bartender အသစ်တဲ့။ နှစ်တိုင်းအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်တွေတိုင်း တွေ့ဆုံရတဲ့လူတွေထဲမှာ သူကတော့အသစ်ပါ။ တော်တော် ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ပိန်ပိန်သွယ်သွယ်၊နက်မှောင်သော သေသပ်စွာဖီး သင်ထားသော ဆံပင်ပိုင်ရှင်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာမှာ အထင်ရှားဆုံးက ပိရိသေသပ်သော နှုတ်ခမ်းနှင့် ခိုင်မာသောမေးရိုးတို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူဟာ player တစ်ယောက်၊ ပြီးတော့အဲဒီအပိုင်းမှာ နည်းနည်းအတယ်ထင်ရဲ့။ ကျွန်တော်ပြန်ခဲ့ပြီး နှစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ သူက စားပွဲထိုးမလေးနှစ်ယောက်နှင့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးပြီ။ တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းမဟောင်း ဘေဘီပါ။
ဒီလို ငါးရံ့နှစ်ကောင်ဇာတ်လမ်းတွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့နေရာမှာ ယောက်ျားနှင့် မိန်းမကွာခြားချက်က ယောက်ျားလေးက သူလိုချင်တာကို ရဖို့ အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးကိုသိသလို စွန့်ခွာရမဲ့ အချိန်အခါကိုလည်း သိတယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွေးကတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ လူဆိုးလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ငါပဲ့ကိုင်လိုက်ရင်အိုကေ သွားနိုင်ပါတယ်၊ သူ့ကိုဦးဆောင်ထိန်းသိမ်းပေးရမှာ ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ကြတာလေ။ သူတို့အမြင်မှန်ကန်ကြောင်းအဆိုကို ထောက်ခံပေးနိုင်မယ့် ယောက်ျားလေးတွေက အယောက် တစ်ရာမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်များရှိမှာပါလိမ့်? ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ဘေဘီက နှစ်လိုဖွယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးပါ။ ဘယ်လို ငပွေးမျိုးက သဘော မကျဘဲ နေနိုင်မှာလဲ။
အလုပ်တွေ အားလုံးပြီးချိန်မှာ မွေးနေ့ပါတီကိုသွားရအောင်လို့ အဖော်စပ်ခံရတာပါ။ ဘယ်သူ့ပါတီလဲဆိုတော့ အဆင့်မြင့်ကွန်ဒို တိုက်ခန်းမှာနေတဲ့ မျိုးဇင်ရဲ့မွေးနေ့ပါတီပေါ့။ နည်းနည်းတော့တော့ ချီတုံချတုံဖြစ်မိပေမဲ့ အတူလိုက်ဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ချော့မော့ဖျောင်းဖျသံတစ်ချို့ကြောင့် လည်းပါတာပေါ့လေ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်နှင့် မလှမ်းမကမ်းမှာပဲနေမယ်လို့ ဂတိပေးတယ်။ ဒါကလည်း သူမကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်လို့ရအောင်လို့ပါ။ ဘော်ဒါကဏ္ဍပေါ့လေ။
အဲဒါကြောင့်နောက်ဆုံး Customer လေးတွေ စားသောက်ပြီးထွက်ခွာသွားတာနဲ့ မီးဖိုချောင်ကို သန့်ရှင်းသိမ်းဆည်းကာ ဆိုင်ကိုပိတ် လိုက်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်အိမ်ကို အပြေးလေးသွားရေချိုး၊ အ၀တ်လဲလှယ်ပြီး ပါတီမှာဆုံကြမယ်လို့ ဘေဘီကိုပြောလိုက်တော့ ဘေဘီက မျိုးဇင် အိမ်ခန်းကိုသွားရမှာအဝေးကြီးပဲ ပါတီလာမယ့်သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့အလုပ်က အ၀တ်အစားတွေနဲ့လာလဲရမယ် သိပ်သပ်ရပ်သန့်ရှင်းဖို့မလိုပါဘူးတဲ့။
ဒါတော့မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ် အလုပ်မှာ တနေကုန်ဝတ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနှင့် အပြင်ကိုသွားဖို့အထူးသဖြင့် ပါတီတစ်ခုကို သွားဖို့လုပ်ထားတဲ့ အ၀တ်အစားများဖြင့် ကွာခြားရမယ်လေ။ အခုဟာက မီးခိုးနံ့၊ဆီကြော်နံ့၊ဘာနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်း(န်)နဲ့ အ၀တ်မှာ အနံ့တစ်ခုခုတော့စွဲနေတတ် တာပဲမဟုတ်လား။
ကျွန်တော်တို့ပြောတာ နားထောင်နေပြီးနောက် ကေသီက၀င်ပြောသေးတာက မျိုးဇင်တို့ ကွန်ဒိုမှာ ရေကူးကန်ကြီးတစ်ခုပါတယ်။ လူ တွေအားလုံး ရေကူးကန်ထဲမှာပဲ ပါတီပွဲကိုအဆုံးသတ်ကြမှာဆိုတော့ ကိုယ်နံ့တွေအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့ စသည်ဖြင့်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မသင့်တော်ဘူးထင်တယ် ရေကူးဘောင်းဘီကောင်းကောင်းလေးလိုဦးမယ် ဒါဆို။ ဒါကြောင့် ကေသီတို့ကိုရှင်းပြပြီး အိမ်ကို အပြေးလေး ပြန်ပြီး ရေကူးဘောင်းဘီကောင်းတာလေးပြန်ယူဦးမယ်လို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
'ကိုလတ်ရယ် နင်ဟာလေ အရာရာ seriously တွေးတောနေတာ။ အရာအားလုံး အတိုင်းလုပ်နေတော့တာပဲ။ ငါတို့အပတ်စဉ် ရုံးပိတ် ရက် အလုပ် ပိတ်ရက်တွေမှာ တွေ့ဆုံပွဲလေးတွေလုပ် အတူချက်ပြုတ်စားသောက်နေကျဟ'
'ငါတို့ အခုပါတီသွားမယ်၊ ၀တ်စားထားတာတွေက အစုတ်အပြတ်တွေမှမဟုတ်တာ၊ နက်ဖြန်ဆိုင်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ အိမ်ပြန်ပြီး လန်းဆန်းအောင် အနားယူဖို့မလိုတော့ဘူးလေဟာ မနက်စောစောပြန်ကြတဲ့အခါ။ ဘယ်သူ့ကို ရှိတ်မလို့လဲနင်က?'
ကေသီတို့ပြောနေတာ က ဘော်ဒါတွေချည်းပဲစုပြီးပျော်ကြမှာ အရေးတကြီးကိစ္စတွေလုပ်နေဖို့မလိုဘူးပေါ့။
'ကျွန်တော်က ကို့ရိုးကားယား မခံစားချင်ဘူး။ သူများတွေ ရေကူးဝတ်စုံကောင်းကောင်းလေးတွေနှင့် ဟန်ရေးပြနေချိန်မှာ ဂျင်းဘောင်းဘီ နဲ့တီရှပ်ပဲဝတ်ပြီး ထိုင်ကြည့်မနေချင်ဘူးလေဗျာ'
'ကြည့်၊ အဲဒီအတွက် ရှင်စိတ်ပူနေရင် 'မျိုးဇင်' အခန်းသွားတဲ့လမ်းမှာ City-Mart ရှိတယ်။ ဈေးသက်သာတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံဝယ်လိုက်ပေါ့။ အဲဒီမှာက ဈေးမှန်၊ ပစ္စည်းမှန်'
'မျိုးဇင်က City-Mart ဆိုင်နားမှာနေတာလား?' ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေအားလုံး City-Mart ဆိုင်တစ်ဆိုင်နားမှာနေတာကြီးပါပဲ။
'အိုကေလေ...ဒါဆို ကျွန်တော် မျိုးဇင်တိုက်ခန်းရှိရာဘယ်လို?'
'ကိုလတ်....၁၆လမ်းအပေါ်ဘလောက်အတိုင်းလာခဲ့ City-Mart ကိုဖြတ်ပြီးတော့'
'City-Mart ကိုဖြတ်ပြီး?' ကေသီသက်ပြင်းကိုချပြီး စကားဆက်ပြန်တယ်။
'ဟုတ်တယ်၊ ရှင် City-Mart ကိုလွန်လာတာနဲ့အ၀ါရောင် လမ်းမီးတွေရှိတဲ့လမ်းကိုတွေ့မယ်။ အဲဒီလမ်းရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိတယ်ရှင့်'
'ကိုလတ် ကိုလတ်မိဘတွေက ရွှေတောင်ကြားမှာနေတယ်။ ကျွန်မတို့က မြို့ထဲမှာနေတယ်။ အဲဒီလိုပုံစံကြီး မပြောစမ်းပါနဲ့ရှင်။ ဒီမြို့ကို ရှင်သိတယ်၊ ဒီတိုင်းပြည်ကိုရော။ ကျောင်းသွားတက်ပြီး ပြန်လာတာနဲ့ အားလုံးပြောင်းသွားတော့တာပဲ။ ဘယ်အချိန်တုန်းက အဲဒီလို အမြင့်ကြိုက်သွားရတာလဲ?'
'ဆောရီး....ဆောရီးပါဗျာ။ ကျွန်တော်က မျိုးဇင်လို ယောက်ျားလေးမျိုးကိုသဘောမတွေ့ရုံသက်သက်ပါ'
'သူက တကယ်တမ်းတော့ လူရှုပ်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းအပေါ် လိုက်လိုက်လျောလျော ဆက်ဆံတတ်လွန်းတာပါ။ ဘေဘီ အပေါ် ဒါမှမဟုတ် ကေသီတို့အပေါ် မလိမ်ညာခဲ့သလို တစ်ယောက်ယောက်အပေါ် အထူးဂရုစိုက်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင့်။ ကျွန်မတို့ ကသာ တိမ်းညွှတ်လွယ်ခဲ့ကြတာ'
'အင်း....ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ'် အဲဒါကို ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို သဘောပေါက်ရပြီးနောက် ကျွန်တော့်အမူအရာတွေ ပြောဆိုနေတာတွေကို ပြောင်းလဲလိုက်ကာ စကားဆက်လိုက်ရပါတယ်။
'ဒါဆို ၁၆လမ်းအလယ်ကို ၀င်လာပြီး...'
'အဲဒီ့အတိုင်းဝင်လာပြီးရင် သစ်သားဘောင်တွေနဲ့ လှလှပပ ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ကြီးကိုတွေ့ရမယ်'
သက်ပြင်း အသာချရင်း လမ်းခွဲခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကားကို ၁၆လမ်းဘက်မောင်းလာရင်း ခမ်းနားလှတဲ့ City-Mart ကြီးထဲဝင်ခဲ့ပြီး ကားပါကင် မှာ နေရာအသာချလိုက်ပါတယ်။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ပြီး fashionable ဖြစ်မယ့် ရေကူးဝတ်စုံကိုဝယ်ဖို့စိတ်ကူးလိုက်မိ ချိန်မှာ ဒီ စူပါမားကတ်ကြီးထဲက နာရီက ၁၂နာရီထိုးသံပေးပါရော။ ဒီနိုင်ငံမှာ စူပါမားကတ်တွေက ၂၄နာရီ ဂုဏ်ယူစွာဖွင့်ကြတာလေ။
ကျွန်တော် အတွင်းထဲဝင်ခဲ့ရင်း အ၀တ်အစား section ဘက်ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ မီးအလင်းရောင် စူးစူးကြောင့် နည်းနည်းမျက်စိဝေ သွားတာ မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လုပ်ရင်း အမြင်ကြည်အောင်လုပ်နေစဉ် လူငယ်စုံတွဲတစ်တွဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်က လျှောက်လာ တာကို သတိထားမိလိုက်ပါရဲ့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းထဲ အာရုံပြုမိရလောက်အောင် ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းက ဒီဧရိယာမှာ ဈေးဝယ်သူ သူတို့ပဲရှိတာကိုး။ ပြီးတော့ကောင်လေးက အရမ်းတာကြောင့်လည်းပါတယ်လေ။
သူတို့ကြည့်ရတာ အထက်တန်းကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေပုံစံ။ ငယ်ရွယ်၊ နုပျို၊သန်စွမ်းကြတာ။ ကောင်မလေး က ၀တ်ထားတာမဆိုးဘူး ခေတ်မှီပြီး သူနဲ့အဆင်ပြေတယ်။ အဖြူရောင် ကိုယ်ကြပ်အင်္ကျီနှင့် အောက်ရှူးဘောင်းဘီအနီရောင်ကို ၀တ် ထားတာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလှလှတွေကို လုံအောင်မဖုံးနိုင်ဘူး။
ကောင်လေးက မျက်စိကျစရာ အမျိုးကောင်းသားလေး။ အရပ်ရှည်ရှည်၊ ပခုံးကျယ်ကျယ်၊ ရင်အုပ်မာမာနှင့်။ ဆံပင်က ရှုပ်ပွပွ ဒီဇိုင်းနဲ့ ခိုင်မာတဲ့မေးရိုးပိုင်ရှင်။ သူ့မျက်ဝန်းတောက်တောက်များအပြင်ရယ်မောလိုက်တိုင်း ပေါ်လာတတ်တဲ့ ပါးချိုင့်အစုံက ရုပ်ရည်ကိုပိုမို ချောမွေ့စေတာပေါ့။
ကာကီရောင် ဘောင်းဘီတိုနှင့် အနက်ရောင် ရှပ်လက်တိုကိုဝတ်ထားတာ သန်မာတဲ့ သူ့လက်မောင်းဆုံတွေကို တမင်ပြနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော့်ဘေးနားကနေ ဖြတ်သွားတာ ကိုယ်သင်းနံ့တစ်မျိုးလေးရသလို ကောင်ငယ်လေးမျက်နှာကို မသိမသာနှစ်ခါလောက် စောင်း ငဲ့ကြည့်ဖြစ်ရပါတယ်။ "အတော်လိုက်ဖက်တဲ့အတွဲ" ဆိုတာ သူတို့နှစ်ယောက်ပါပဲ။
အတွေးထဲ ခဏ၀င်နေတဲ့ ကောင်ငယ်လေးစုံတွဲရဲ့ ပုံရိပ်ကို ခေါင်းကိုအသာရမ်းပြီး ဖျောက်ပစ်လိုက်ကာ အ၀တ်အစားတွေထားတဲ့ ဘက် ကို လျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အမျိုးသား swim wear နှင့် underwear တွေထားတဲ့ဘက်ခြမ်းကိုရောက်ရပါရော။ မျိုးစုံမှ တကယ့်မျိုးစုံတာ။ အမျိုးသားတွေအတွက် တင်ဖုံးရုံဒီဇိုင်း၊ အမျိုးမျိုးသော အရောင်အသွေးဒီဇိုင်းတွေ အခုမှဘဲမြင်ဘူးတော့တယ်။ ဟိုသည်မွှေရင်း အပြာ ရောင်ပြောင်ဘောင်းဘီတစ်ထည်ရွေးယူလိုက်တာ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ပေါ့။ ဒီလောက်ဆိုတော်ပါပြီ အသားလည်း ကောင်း ၀တ်ဖို့လည်း အဆင်ပြေမယ်။
ဘေးဘီကို လူရှင်းမရှင်း တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် ဘောင်းဘီကို ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ ကပ်ပြီးအခြေ အနေကြည့်လိုက်တာ မဆိုးပါဘူး အိုကေသား။ အဲဒါနဲ့ သေသေချာချာဝတ်ကြည့်ရအောင် fitting room တွေဘက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ အ၀တ်အစားကောင်တာအများအပြားရှိနေပေမဲ့ အစမ်းဝတ်ကြည့်လို့ရတဲ့ ဒီအခန်းလေးတွေက နည်းနည်းများ ကျဉ်းကြပ်နေသလားပဲ။ ဒီလိုညပိုင်းအချိန်တွေမှာ အ၀တ်အစားဝယ်သူတွေမှ သိပ်မရှိတတ်တာ တော်သေးတယ်။ အခန်းလေးတွေကို ဟိုသည်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ယောက်မှ နတ္ထိ။
အခန်းလေးတွေ စီစီရီရီရှိတဲ့အထဲက အဦးဆုံးအခန်းလေးထဲဝင်ကာ လော့ခ်ျချလိုက်တယ်။ အခန်းက သေးသေးလေးပေမဲ့ အခန်းတံခါးမှာ မှန်တစ်ချပ်၊ ရှေ့တည့်တည့်မှာ မှန်တစ်ချပ်၊ နံဘေးက နံရံမှာ အ၀တ်ချိတ်ကလေးတွေ။ အခန်းလေးတွေကိုတော့ အပေါ်၅လက်မအောက် ၃လက်မလောက်လွတ်ပြီး ကာထားပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးလာတဲ့ ဘောင်းဘီကို ကိုယ့်ဖာသာ အတော်သဘောကျနေမိပါတယ်။ တစ်ထည် လုံး အပြာရောင်၊ ခါးပတ်ကြိုးပြားနှင့် အနားသတ်က အဖြူဆွတ်ဆွတ်။ ခါးပတ်ကို ဂျင်းဘောင်းဘီက မြန်မြန်ဖြုတ်၊ ကြယ်သီးတွေကို တစ်လုံးခြင်းဖယ်၊ အောက်ကိုလျှောချွတ်ကာ ဘောင်းဘီကို ထိုင်ဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ ခုံသေးသေးလေးပေါ် လှမ်းတင်လိုက်ပါတယ်။ အခန်း ဘေးနံရံက အသံသဲ့သဲ့ကို ကျွန်တော်ကြားရပါရော။ တစ်ယောက်ယောက် ဘေးက fitting room ထဲဝင်လာတာဖြစ်မယ်။ အသံကို နားစွင့်နေပြီးမှ အ၀တ်ချွတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့။
အနံ့နည်းနည်းထွက်နေတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူဆွတ်ဆွတ်ကို ကြယ်သီးဖြုတ်လိုက်ရင်း တံခါးရွက်နားက ချိတ်မှာချိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးမှာ ဘောင်းဘီတစ်ထည်ဝတ်ထားတာကလွဲလို့ ဘာမှမရှိတော့။ ရှေ့မှန် နောက်မှန်တွေဆီ လှည့်ပတ်ကြည့်ရင်း ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကို ကိုယ်သဘောကျနေမိတယ်ဗျ။ ဟီး...ရွေးထားတဲ့ City-Mart က swim suit ကျွန်တော်နှင့် တော်တော် လိုက်ဖက်သားပါ။
၀တ်ထားတဲ့ Underwear ကိုအသာအယာဆွဲချွတ်ပြီး ခဏငြိမ်နေမိစဉ်မှာ တခစ်ချစ်ရယ်သံကို တိုးတိုးကြားလိုက်ရတယ်။ ဘေးအခန်းက တွန်းတွန်းထိုးထိုး အသံပိုကြားလာရပေမဲ့ သူတို့ကို ဂရုမစိုက်အားပါဘူး ရှေ့နောက်မှန်တွေထဲပေါ်နေတဲ့ အ၀တ်မဲ့ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ် ကို ကိုယ့်ဖာသာ သဘောတကျကြည့်ရင်း အာရုံစိုက်နေမိတာ။ ခန္ဓာကိုယ်လည်းအချိုးကျ၊ အသားအရေနှင့် ဆံပင်စတိုင်လ်ကလည်း အဆင်ပြေ။ ဒါပေမဲ့ ညီဘွားရဲ့ဆိုဒ်ကိုတော့ ဒီထက်နည်းနည်းရှည်ချင်သေးတယ်။
"ကျွတ်" ဒီတစ်ခါ တခစ်ခစ် ကျိတ်ရယ်သံက တစ်ယောက်တည်းရယ်တာ မဟုတ် နှစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်။ အသံတွေက မသင်္ကာစရာ ကောင်းနေရဲ့။ ကာထားတဲ့နံရံက အပြည့်မဟုတ် အောက်ခြေမှာနည်းနည်းလွတ်နေတော့ မမြင်ရတာထက်စာရင် ချောင်းကြည့်လို့ရ ပါသေးတယ်။ ပြောင်လက်နေတဲ့ ကြမ်းပြင်ကြောင့် သူတို့အရိပ်တွေ လှုပ်ရှားနေတာကိုမြင်ရတာ ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းပါ့။ ကြီးမားသန်မာ တဲ့ခြေဖ၀ါး၊ အမွှေးထူခြေသလုံး၊ ကာကီရောင်ဘောင်းဘီတို....အိုး...ကျွန်တော် စောစောက မြင်ခဲ့ရတဲ့ ကောင်လေးများလား?
ကျွန်တော်တို့အခန်းနှစ်ခုကြား ကာရံထားတဲ့ နံရံကိုလိုက်ကြည့်မိတော့ ထိုင်ဖို့လုပ်ပေးထားတဲ့ ခုံပုလေးရဲ့ဘေးမှာ အပေါက်သေး သေး လေးကိုတွေ့ရတယ်။ ခဏနေက ခြေဖ၀ါးပိုင်ရှင်ဟာ ဘယ်သူလည်း အရမ်းသိချင်တာကြောင့် ချောင်းကြည့်လိုက်တာ ရှုပ်ပွပွ ဆံပင်ကို အရင်မြင်ရတယ်။ အသားရောင်တီရှပ်ကို ကုန်းပြီးချွတ်နေတာပဲဗျ။ ခါးကိုပြန်မတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ရင်ဘတ်က အမွှေးနု... 'Ahhh…' ဒီထဲဝင်လာတုန်းက မျက်နှာခြင်းဆိုင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကောင်လေး။ တစ်ခြားတစ်ယောက်က သူ့ရည်းစားကောင်မလေးပဲဖြစ်မှာ။
ရင်တွေအရမ်းခုန်လာသလို သူတို့ဘာလုပ်မလဲ ပိုပိုပြီးကြည့်ချင်လာတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အခန်းလေးထဲ ဟိုသည်ကြည့်မိတော့ အ၀တ်ချိတ်ရာ ငုတ်ကလေးတွေဘေးမှာ လက်ကိုင်မှန်လှလှလေးတစ်ခု၊ ကံကောင်းလိုက်တာလို့ တွေးမိရပြီး လှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ ကြမ်းပြင်က နည်းနည်းကွာနေတဲ့ နံရံရဲ့အောက်ဖက်မှာ သေချာချိန်ပြီး ထားလိုက်တယ်။ အရင်ဆုံး ခြေဖ၀ါးနှစ်ခုကိုတွေ့ရတာပဲ။ ကောင်မလေးက ထိုင်ခုံလေးမှာထိုင်နေပြီး ကောင်လေးက ရှေ့တည့်တည့်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတာလေ။ ဒါပေမဲ့ အခုဟာက ကောင်လေး နောက်ကျောဘက်ကိုပဲမြင်နေရတာ ရှေ့ဖက်မှာ သူတို့ဘာလုပ်နေလည်း မမြင်ရဘူး။
မှန်ကိုနေရာရွှေ့ပြီး အခြေအနေထပ်ကြည့်ဖို့ အခန်းလေးရဲ့ အကာနံရံအပေါ်တည့်တည့်မှာရှိတဲ့ မီးချောင်းဘေးနားက နေရာလွတ် လေးမှာ ထောင်ကြည့်လိုက်တာ ခဏနေကထက်ပိုပြီး အခြေအနေကောင်းတယ်။ အခုကောင်လေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမြင်ရပြီ။ သူ့ရဲ့နောက်စေ့၊ သူ့ပခုံး၊ သူ့ခါးအောက်ပိုင်း အကုန်လုံးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ပိုင်းကို မမြင်ရတာကြောင်း အခန်းနှစ်ခုကြားကားထားတဲ့ နံရံလေးရဲ့ အောက်ခြေကနေ မှန်လေးကိုထိုးထည့်လိုက်တာ ဖြေးဖြေး။ မှန်လေးကို အသာထိုးထည့်ရင်း တစောင်းလေးထောင်လိုက် ချိန်မှာ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ကောင်လေးရော၊ သူ့ကောင်မလေးရောမြင်ရပါပြီ။မှန်လေးကို ပိုပြီးတိုးလိုက်ချိန်မှာတော့ ထူးဆန်းဖွယ်အရာ တွေ ဖြစ်နေပါရောလား။ လက်ကိုင်မှန်ချပ်လေးကနေ ကျွန်တော့်အ၀တ်လဲခန်းတံခါးနံရံက မှန်ချပ်ကြီးဆီ ပုံရိပ်တွေကို ရုပ်ရှင်ပြသလို ထိုးနေတော့တာ။ အထူးတန်းကနေ ပိတ်ကားနားကို တိုးကြည့်နေသူက ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်တည်းပေါ့။
'Wow!' ဆံနွယ်ခွေ အလိပ်လိပ်တွေနှင့် ကောင်မလေးရဲ့ ဦးခေါင်းဟာ တလှုပ်လှုပ်နှင့် တစ်စုံတစ်ခုကို ပါးစပ်ထဲအသွင်းအထုတ်လုပ် နေတာပဲ။ Oh my God! ကောင်လေး -ီးတံကြီးက အရွယ်နှင့်မလိုက်ထွားကျိုင်းလှစွာ အနီရဲရဲ နှုတ်ခမ်းလွှာတွေ၊ လျှာတွေကတစ်ဆင့် အာခံတွင်း အတွင်းပိုင်းအထိ ၀င်ထွက်နေတော့တာ။ ခါတိုင်း သူတို့တွေ ဒီလိုလုပ်နေကြလားမသိပေမဲ့ ကောင်မလေးက ကျွမ်းကျင်လိုက် တာများ ကြည့်နေတဲ့ ကျွန်တော်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားလာရတယ်။
အရင်းအဖျားညီစွာ တုတ်ခိုင်လှတဲ့ ငပဲကို ကွမ်းသီးခေါင်းလေးပဲ ငုံစုပ်လိုက် ထိပ်ပေါက်ဝလေးကို လျှာနဲ့ကလိလိုက် လုပ်နေတာ ကောင်ငယ်လေးခမျာ ဒိုးဒိုးဒန့်ဒန့်ကို ဖြစ်နေတာပဲ တစ်ကိုယ်လုံး။ ကောင်မလေး စုတ်မှုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းဟာ ကျွန်တော်မြင်ဖူးနေကျ ငပဲတွေထဲမှာ အထွားဆုံးပါ။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေနှင့် ကွမ်းသီးခေါင်းကို ပွတ်သပ်လိုက်၊ ငုံစုပ်လိုက်လုပ်ရင်း လည်ချောင်းထဲရောက် အောင် သူလုပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ဟာကနဲဖြစ်သွားရတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ စုတ်မှုတ်နေတဲ့ ကောင်မလေးဟာ ပါးစပ် ထဲက ငပဲကြီးကို အပြင်ထုတ် လက်နဲ့အားရပါးရ ကိုင်ရင်းကစားနေတာမှာ သူမမျက်လုံးတွေဟာ ကျေနပ်အားရမှုအသွင်နှင့် အရောင် တွေကို တောက်လို့။ ကောင်မလေးဟာ ပြုံးရွှင်နေတဲ့အကြည့်နှင့် သူ့ကောင်လေးကိုမော့ကြည့်ရင်း နံရံကမှန်မှာ ပေါ်နေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မသိမသာလှမ်းကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မှန်သေးလေးက တစ်ဆင့်မြင်လိုက်ရတာက သူမ ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက် ကြည့်ပြီး ပြုံးပြလိုက်တာပဲ။ ဒါ....ဒါ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။
ကောင်မလေးက သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဟာ မရိုးမရွနှင့် ထိန်းမရတော့ပါဘူး။ shaggy hair design နဲ့ အဲဒီ ကောင်လေးရဲ့ ပစ္စည်းကို အခုပဲဆွဲကိုင်လိုက်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ခိုင်လှတဲ့ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့နမ်းရင်း အာခံတွင်း ထဲထိသွင်းပစ်လိုက်ချင်တာ...။
ကောင်ကလေးရဲ့ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းကို ကြားလာရသလို တစ်ချက် တစ်ချက် အားမလိုအားမရ ညည်းတွားသံကိုလည်း ကြားရတဲ့ အချိန် ကျွန်တော် မာထောင်နေတဲ့ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကိုင်ကာ အားရပါးရကစားမိရပါပြီ။ ခပ်သေးသေးမှန်ချပ် ရုပ်ရှင်ရုံ လေးက ပြသနေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အပြိုင်ခံစားမှုတွေကို အရှိမြှင့်ရင်းပေါ့။
အချိန်ခဏဖြတ်သန်းပြီးနောက် ကျွန်တော့်ပါးစပ်တစ်ခုလုံးလည်း တောင့်တမှုတွေကြောင့် သွားရည်တွေ ယိုလာရပြီးကျွန်တော့် belly တွေ လည်း လှိုင်းလုံးတွေလို လှုပ်ရှားလာရပါပြီ။ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလို tempo အမြင့်ဆုံး ခံစားမှုမျိုး မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။အဲဒါ အသေအချာ။ မျက်လွှာ တွေကို ခဏ ပိတ်ရင်း ငြိမ်လိုက်တာ အထူးတဆန်း ဟိုဘက်ခန်းက ကောင်မလေးနေရာ ကျွန်တော်ရောက်သွားပြီး ကောင်လေးရဲ့ငပဲကို ထိတွေ့ အရသာခံနေပါရော။ 'အိုး....အာ...အ' အာရုံထဲမှာ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ကောင်ငယ်လေးနေရာမှာ 'မျိုးဇင်' ဖြစ်သွားမှန်းမသိ အ၀တ်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ သူရပ်လို့။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို ဟိုကောင်လေးပျောက်သွားပြီး မျိုးဇင်ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်သိတယ် မျိုးဇင်ကို အရမ်းမုန်းတယ်ဆိုတာ အမှန် တကယ်တော့ အဲဒါမုန်းနေခဲ့တာမဟုတ်၊ သူ့ကိုလိုချင်ခဲ့တာ လိုအပ်နေခဲ့တာ။ သူ့ကို ကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်ရလို့ မနာလိုစိတ်တွေဝင်နေ ခဲ့ခြင်း။
သက်ပြင်းတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်ကာ စိတ်ကူးယဉ်မှုထဲက ခဏထွက် ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ခပ်သွက်သွက်လက်ကစားရင်းမိပါတယ်။ ရှည်ပြီး တုတ်တဲ့ မျိုးဇင် ငပဲကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲများ ထည့်လိုက်ရရင်....ဟူး။
တစ်ဖက်ခန်းက ကောင်လေးရဲ့ ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့ဟာ ပိုကျယ်လာတာကြောင့် မှန်ချပ်လေးကတစ်ဆင့်မြင်ရတဲ့ ပုံရိပ်ကို အာရုံစိုက် မိပါတယ်။ ကောင်မလေးက ပါးစပ်ထဲ ခပ်သွက်သွက် အသွင်းအထုတ်လုပ်ကာ ခဏနေတော့ လက်ဖြင့် ကစားပေးနေခြင်း။ 'မရပ်နဲ့. ...အား...မရပ်နဲ့နော်' ကောင်ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှု၊ အသံတွေကြားနေရတာဟာ အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်ဆီ သူရောက်တော့မယ်ဆိုတာ ပြောနေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ကရော ဘာထူးလည်း..။
ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကောင်မလေးလက်တွေကြားပေါ်လိုက်မြှုပ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ငပဲဟာ တဖြည်းဖြည်းထွား သထက်ထွားလာပြီးနောက် ကောင်မလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖျား၊ ပါးပြင်နှင့် ရင်ဘတ်များပေါ်သို့ သင်္ကြန်ရေပြွတ် ပန်းထုတ်လိုက်သလို ဖြန်း လိုက်ပါရော အားရပါးရ။ ကောင်မလေးက ရုတ်တရက် တစ်ချက်အော်လိုက်ပြီးနောက် တခစ်ခစ် ရယ်မောပါတော့တယ်။ သူမကြိုးစား မှုအတွက် ရလာဒ်ပေါ့လေ။
သူတို့ဖြစ်ပျက်ပုံကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး ကျွန်တော့်ငပဲမှ အရည်ဖြူပျစ်ပျစ်တွေဟာလည်း ကျွန်တော့်လက်ချောင်း များမှတစ်ဆင့် ခုန်ထွက်ကာ အခန်းနံရံကို ဗြန်းကနဲ အကုန်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ခြေကုန်လက်ပန်းကျ ထိုင်ချလိုက်မိကာ တစ်ဖက်ခန်းက အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးက မျက်နှာသုတ်တစ်ရှူးကို ကောင်မလေးဆီ ကမ်းပေးနေတာဗျ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့။ 'သူတို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်ဦးမလဲ မသိ' ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ အဲဒီလိုတွေးမိပြီး သူတို့ဒီထက်ခံစားမှုမြင့်တာ ထပ်မံလုပ်ကြမယ်ထင်ထား တာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ကိစ္စ၀ိစ္စပြီးသွားပြီ။ ဒီထက်မပိုကြ။
ကောင်မလေးက သူ့မျက်နှာတွေ၊ ရင်ဘတ်ပေါ်ကအရာတွေသုတ်သင်ပြီး မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ ရည်းစားကောင်လေးရဲ့ ခြေထောက် အစုံမှာ ပုံကျနေတဲ့ ဘောင်းဘီကို ခါးဆီပင့်ဝတ်ပေးလိုက်တယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေကတော့ အခန်းထောင့်အောက်ခြေက မှန်လေးဆီ ဒါရိုက်ကြည့်တာဗျ။ ကျွန်တော်တော့သွားပြီ။
'တဘက်တစ်ခုလောက်လိုဦးမလား?' ကောင်မလေးက အားရပါးရ ကျွန်တော့်ဆီပြုံးကြည့်ရင်းမေးတယ်။ ဒါဆို သူမ သိနေခဲ့၊ တစ်ချိန်လုံး ရိပ်မိနေခဲ့တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး ရဲတွတ်သွားပြီထင့်။
'Uh.....ဟုတ်ကဲ့' ကျွန်တော့်နှုတ်က စကားတွေထစ်ကုန်ပါပြီ။ အောက်ခြေက လွတ်နေတဲ့နေရာက အပြာရောင်တဘက်အသေးလေး တစ်ထည် တိုးဝင်လာတာနဲ့ ကျွန်တော် ကောက်ယူလိုက်ကာ မပီမသ ခပ်တိုးတိုးကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်မိပါရော။
'ကျေးဇူး....ပြီးတော့ ကျေးဇူးပါ ဟိုဟာ....'
သူ့ရည်းစားကောင်ကလေးက ဘယ်သူနှင့် စကားပြောတွေပြောနေလဲဆိုပြီးရှာနေတာ ကောင်မလေးက ကြမ်းပြင်ထောင့်မှာရှိတဲ့ မှန် ကလေးကို ညွှန်ပြပြီး အဖြေပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကောင်ကလေးလည်း အားရပါးရရယ်မောကာ နှစ်ဦးသား အခန်းလေးထဲက ထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်မိနစ်နည်းနည်းလောက်တော့ တွေဝေနေသေးတယ် ပါတီကိုသွားရင် ကောင်းမလားပေါ့။ စိတ်ထဲနည်းနည်းငြိမ်သွားပြီးမှ ပေကျံ နေတာတွေ သုတ်သင်လိုက်ပြီး အ၀တ်တွေ ပြန်လည်ဝတ်ဆင်ကာ ပါတီပွဲဆီဆက်လာလိုက်ပါတယ်။
ပါတီကျင်းပရာရောက်တော့ ကေသီက ဘာကြောင့် အဲဒီလောက်ကြာနေလဲမေးတယ်။
'အာ...ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး မျိုးဇင်အပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်လေးမွေးကြည့်နေတာနဲ့'
'ကောင်းပါ့ရှင်....အခုရော အမြင်တွေကြည်ပြီး ခံစားချက်ကဘယ်လိုရှိ?'
ဟုတ်တယ် ကြိုက်ပါတယ် သူဆိုတဲကမျိုးဇင်ကိုပေါ့။
Alex Aung ( 5-11-10)
Posted by Alex Aung at 4:18 PM